भारी गिरावट पछि बुलिस मारुबोजु : लगानीकर्तामा उत्साह - Laltin.com
भारी गिरावट पछि बुलिस मारुबोजु : लगानीकर्तामा उत्साह
लाल्टिन डट कम September 22, 2021
काठमाडौँ। बुधबार १०४.८८ बिन्दुले बढेको नेप्से ३.८७% वृद्दिको साथ २८१६.९५ पुगेको हो।कारोबार भएका २१७ कम्पनी मध्ये १८४ कम्पनी उकालो लागेका छन् र कुनै कम्पनी ओरालो लागेका छैनन् भने एक कम्पनी स्थीर रहेको छ।
कारोबार भएका तेह्र उप-समूहमध्ये सबै उप-समुहको सेयर मुल्य उकालो लागेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आजको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३९ खर्ब ९४ अर्ब बराबर पुगेको छ । कारोबार रकमको आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड लगभग २३ करोड ३४ लाख बराबरको रकम सहित प्रथम स्थानमा पुगेको छ। संख्याको आधारमा भने नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४ लाख २१ हजार ९ सय ७३ कित्ता सेयर करोबार सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
आज टप गेनर्समा १३ वटा कम्पनीको १०% मुल्यवृद्दिका साथ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ।
NEPSE Daily last updated: 22-09-2021
NEPSE Volume and cumulative A/D line Last Updated 22-09-2021
क्युमुलेटिभ एडी लाइन हिजो भन्दा -८८५ बाट बढेर -७०१ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ९६४३००० रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम (१४४३०८६३.१९) को ०.६७% देखिएको छ। यसरी दुबै क्युमुलेटिभ एडी लाइन, प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा नेप्सेले आफ्नो डाउनवार्ड मुमेन्टम गुमाइसकेको देखिन्छ र यसले ट्रेण्ड रिभर्सलको सङ्केत गर्दछ।
Tags: bussiness and finance
Previous: बजारमा अनिश्चितता : के डाउनट्रेण्ड सकिएको हो ?
Next: आरोह अवरोहको चक्रमा सेयर बजार
साताको अन्तिम कारोबार दिनमा नेप्सेमा आयो १४.७० अंकको गिरावट।
कसरी हुन्छ आइ.पी.ओ बाँडफाँड, के हिनामिना गर्न मिल्छ ?
ब्याजदर घट्ने भएपछि नेप्सेमा आयो ६०.५६ अंकको वृद्धि।